Ukwakhiwa kweMichiza yeBhunga loLuntu
IQumrhu loLuntu lwakhiwa njengezixhobo kunye nezixhobo
Uninzi lwezinto ezifunyenweyo kwindalo nazo zifumaneka emzimbeni. Le yinto yokwakheka kweekhemikhali yomyinge womntu omdala ngokwemigqaliselo yamacandelo kunye kunye nezixhobo.
IiKlasi eziPhambili zeMveliso kwiBhunga loLuntu
Uninzi lwezinto zifumaneka kwiimveliso. Amanzi kunye namaminerali ayimimandla engabonakaliyo. Iimpawu ze-Organic ziquka i-fat, iprotheni, i-carbohydrates, kunye ne-nucleic acid.
Amanzi : Amanzi yinkalo enkulu yamakhemikhali kumaseli esiphilayo, afikelela kuma-65 ekhulwini ukuya kwi-90 ekhulwini nganye yeseli. Kukho kwakhona phakathi kweeseli. Ngokomzekelo, igazi kunye ne-cerebrospinal fluid ininzi yamanzi.
I-fat : Ipesenti yeoli ihluka ukusuka kumntu ukuya komntu, kodwa umntu ogqithiseleyo unamanzi amaninzi kunamafutha.
Iprotheni : Kwindoda ephilileyo, iipesenti zeprotheni namanzi ziyafana. Kuthe malunga neepesenti ezili-16 ngobukhulu. Imisipha, kuquka intliziyo, iqulethe i-muscle eninzi. Izinwele kunye neminwe ziprotein. Isikhumba sinomlinganiselo omkhulu weprotheni, naye.
Amaminerali : Iimali zamaminerali malunga neepesenti ezingama-6 zomzimba. Ziquka izaliti kunye nezitye. Iimaminerali eziqhelekileyo ziquka i-sodium, i-chlorine, i-calcium, i-potassium, nentsimbi.
I-carbohydrates : Nangona abantu basebenzisa i-sugar glucose njengomthombo wamandla, akukho nto eninzi ekhululekile kwigazi xa kunikezelwa ixesha. I-Sugar kunye nezinye i- carbohydrate i- akhawunti kuphela malunga ne-1% yomzimba.
Izinto ezenziwa kwiBhunga loLuntu
Iingxelo ezithandathu ze-99% zobunzima bomzimba womntu . I-CHNOPS enegama eliqhelekileyo ingasetyenziselwa ukunceda ukukhumbula ezintandathu izinto eziphambili zeekhemikhali ezisetyenziselwa kwiimodeli zezinto eziphilayo.
C yi-carbon, H i-hydrogen, i-nitrogen, i-oxygen, i-P i-phosphorus, kwaye i-S isulfure. Ngoxa i-acronym iyindlela efanelekileyo yokukhumbula ubungqina bezinto, ayibonakalise ubuninzi babo.
I-oksijeni iyona nto ininzi kakhulu ebunini bomzimba womntu malunga ne-65% yobunzima bomntu. I- molecule yamanzi nganye iqukethe i-athomu ezimbini ze-hydrogen ezihlanganiswe kwi-atom ye-oksijini, kodwa ubunzima be-athomu nganye ye-oksijini buphezulu kunokuba buninzi be-hydrogen. Ukongezelela ekubeni yindawo yamanzi, i-oxygen ibalulekile ekuphefumulweni kwamaselula.
I-Carbon iqulethwe kuwo onke ama-organic compounds, yintoni eyenza i-carbon ibe yinto yesibini ebuninzi kakhulu emzimbeni, eqikelelwa malunga ne-18% yomzimba. I-Carbon itholakala kwiiprotheni, i-carbohydrates, lipids kunye ne-nucleic acid. Kukwafumaneka kwakhona kwi-carbon dioxide.
I- atrojeni ye- hydrogen yiyona nto ininzi kakhulu ye-athomu kumntu, kodwa ngenxa yokuba ilula, yenza kuphela i-10% yobunzima. I-Hydrogen isemanzini, kunye ne-electron carrier ebalulekileyo.
I-nitrojeni ingama-3.3% omzimba. Itholakala kwiiprotheni kunye ne-nucleic acids.
Iakhawunti yeCalcium i-1.5% yobunzima bomzimba. Isetyenziselwa ukwakha amathambo namazinyo, kunye nokubaluleka kokuqhekeka kwemisipha.
I-Phosphorus i-1% yomzimba. Eli qakala lifumaneka kwi-nucleic acids. Ukuqhawula izibophelelo ezidibanisa iamolekyuli ye-phosphate yinkalo enkulu yokudluliselwa kwamandla.
I-potassium ijikeleze i-0.2-0.4% yobunzima bomntu. Isetyenziselwa ukuqhuba umthambo. I-potassium iyisitishi esisihloko okanye ion i-ion echaphazelekayo emzimbeni.
I-Sulfure ifumaneka kwezinye i-amino acid kunye neeprotheni. Ku malunga ne-0.2-0.3% yobunzima bomzimba.
I-sodium , njenge potassium, ion i-charge. Ku malunga ne-0.1-0.2% yomzimba. I-sodium inceda ukulawula ukulinganisela kwe-electrolyte emzimbeni nokugcina i-homeostasis ngokubhekiselele kumthamo wamanzi kwigazi nakwiiseli.
Nangona i- aluminium kunye ne- silicon zininzi kwihlabathi, zifumaneka kwiinkalo zomzimba womntu .
Ezinye izinto ezilandeleleneyo ziquka izitye, ezihlala zizibandakanya kwiimvumi. Izinto zokulandelela ziquka i-iron, i-cobalt, i-zinc, iodine, i-selenium, kunye ne-flourine.
Element Ipesenti yeMisa
Intsimbi, iCobalt, iCopper, i-Zinc, iodode landela
Imbekiselo: Chang, uRaymond (2007). I-Chemistry , i-Ninth Edition. McGraw-Hill. iphe. 52.
I-Hassium Facts - Hs okanye i-Element 108
Izakhiwo zeMichiza eziQala ngeNcwadi A
AmaSamarium Facts - Sm okanye uElement 62
Isilwanyana sasePolish Chemistry
IiC - Organic Compounds
Izakhi zeMichiza eziqala ngeNcwadi uN
Isilinganisi (izichazi kunye nezihlomelo)
Yiyiphi i-Qipao kwi-Fashion Fashion yaseTshayina?
Iimifanekiso zamaKrisimesi eziphezulu
Top Wham! kunye noGeorge Michael Solo Iingoma zee-80s
Ukuguqulela isenzi sesiNgesi 'Ngaba'
24 I-Journal Yenza i-Young Writers Writers kwiClassi
Top 10 Eric Church Iingoma